Badweyntimes.com » XOG Cod: Shaqsigii 4-sano ka hor Maalgaliyay Xasan sh. oo hadana FARMAAJO dhanka Lacagta ka caawiyay…Badweyntimes.com
XOG Cod: Shaqsigii 4-sano ka hor Maalgaliyay Xasan sh. oo hadana FARMAAJO dhanka Lacagta ka caawiyay…
Feb 9, 2017 - 3 Jawaabood
iyadoo uu Doorashada Somalia kusoo baxay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa la helayaa xog ku saabsan shaqsiga ka caawiyay dhanka qarashka maalgalinta balse arinta yaabka leh ayaa ah in shaqsigaasi uu ahaa Ninkii Afar sano ka hor Xasan sheekh ka caawiyay dhanka qarashka.
Cod:Madaxweyne Erdogan oo khadka talefonka kula soo xariiray MD Farmaajo maxeyse kawada hadleyn
3 Jawaabood : XOG Cod: Shaqsigii 4-sano ka hor Maalgaliyay Xasan sh. oo hadana FARMAAJO dhanka Lacagta ka caawiyay…
Waa been Farmaajio lacag kuma soo bixin, Fahad yaaasin ,waa damu jadiid sida aan maqalay, Farmaajio kuma xirna urur diimeed, waxbaad isku qakdeysaa.
Waa been Farmaajio lacag kuma soo bixin, Fahad yaaasin ,waa damu jadiid sida aan maqalay, Farmaajio kuma xirna urur diimeed, waxbaad isku qakdeysaa. Maxad u diidey in aad daabacdo?